နောက်တက်ဘလက်ကတော့ Lenovo Tab3 8 Plus | Androidsis
ဟိုဆေး Alfocea | | NOTICIAS, Android တက်ဘလက်များ
တရုတ်ကုမ္ပဏီ Lenovo သည်အလွန်တိတ်ဆိတ်သည့်နှစ်တွင်ဖြတ်သန်းနေရသည်၊ Motorola က။ သို့တိုင်ပုံရသည် ထုတ်ကုန်အသစ်များကိုဆက်လက်ထုတ်ဝေရန်ဆန္ဒရှိသည် စျေးကွက်သို့ရောက်ရှိနိုင်ပြီး၊ ၂၀၁၆ သည်မအောင်မြင်ဘဲအဆုံးသတ်သွားနိုင်သည်။
ကုမ္ပဏီအနေဖြင့်တက်ဘလက်အသစ်တစ်ခုကိုစတင်ရန်စီစဉ်ထားသည်။ သို့မဟုတ်အနည်းဆုံး GizmoCgina မှထုတ်လွှင့်သောယိုစိမ့်မှုမှထွက်ပေါ်လာသည့်အရာကဖြစ်နိုင်ခြေရှိသည့်ပုံရိပ်ကိုပြသသည့်အပြင် Lenovo Tab3 8 Plus၎င်း၏နည်းပညာဆိုင်ရာအသေးစိတ်အချက်အလက်များနှင့်လည်းကျွန်ုပ်တို့အားကျေနပ်အားရစေသည်။
Lenovo Tab3 8 Plus, လာမယ့်ထိပ်တန်း -op-the-range ကိုတက်ဘလက်တရုတ်ထံမှလာလိမ့်မယ်
အထက်ဖော်ပြပါ ၀ က်ဘ်ဆိုက်တွင်ဖော်ပြထားသည့်အချက်အလက်များအရ Lenovo သည် Tab3 အမျိုးအစားတက်ဘလက်များကိုအဆင့်မြှင့်တင်ရန်စီစဉ်ထားသည်။ ထင်ရှားပေါ်လွင်သောပထမအချက်မှာသင်၏ဖြစ်လိမ့်မည် ၁.၂၆ လက်မမျက်နှာပြင် သူကကျေးဇူးတင်၏မျက်နှာသာအတွက် 1024 x ကို 600 resolution ကိုစွန့်ခွာလိမ့်မည် HD အရည်အသွေးပြည့်။ ၎င်းသည် Lenovo Tab3 8 Plus သည်အလယ်အလတ်တန်းစား / အနိမ့်ဆုံးတက်ဘလက်မဟုတ်ဘဲထိပ်တန်းအဆင့်ရှိပစ္စည်းဖြစ်ကြောင်းပထမ ဦး ဆုံးညွှန်ပြချက်ဖြစ်သည်။
၎င်း၏အတွင်းပိုင်းသတ်မှတ်ချက်များသည်စိတ်ဝင်စားဖွယ်ကောင်းပြီးအလားအလာလည်းရှိသည်။ Lenovo Tab3 8 Plus ကိုအောက်ပါအတိုင်းရွှေ့ပြောင်းရမည် Qualcomm Snapdragon 625 octa core ပရိုဆက်ဆာ (ယခင် quad-core Mediatek ချစ်ပ်ထက်များစွာပိုမြန်သည်) 1 GHz အမြန်နှုန်းဖြင့်အလုပ်လုပ်ပြီး၎င်းကို အသုံးပြု၍ ထုတ်လုပ်သည် 14nm နည်းပညာ။ ထို့အပြင်၎င်းသည်ပေါင်းစည်းလိမ့်မည်3GB RAM မှတ်ဉာဏ်.
Android7Nougat နှင့်၎င်း၏သတင်းများအားလုံးပါ ၀ င်မည်ဟုမျှော်လင့်ရသည်။
သိုလှောင်မှုပမာဏနှင့်စပ်လျဉ်း။ 32 နှင့် 64 GB ကို ရရှိနိုင်ရွေးချယ်စရာဖြစ်လိမ့်မည်။
ပြီးတော့ဗွီဒီယိုနှင့်ဓာတ်ပုံအပိုင်းမှာတော့ Lenovo Tab3 8 Plus မှာအောက်ပါအတိုင်းရှိတယ် နောက်ကင်မရာ 8-megapixel နှင့်ရှေ့ကင်မရာ 5-megapixel။ သေချာသည်မှာဤနေရာတွင်၎င်း၏အားနည်းချက်များကိုတွေ့ရှိနိုင်သည်။ သို့သော်၎င်းသည်တက်ဘလက်နှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ဓာတ်ပုံများနှင့်ဗွီဒီယိုများကိုယူခြင်းသည်အသုံးအများဆုံးမဟုတ်ပါ။
သူ၏အခြားအားနည်းချက်တစ်ခုမှာဤအချက်သည်ထူးခြားချက်တစ်ခုမဟုတ်ဘဲ GizmoChina ၏အဆိုအရစွမ်းရည်တစ်ခုတည်းသာသာရှိသောသူ၏ဘက်ထရီဖြစ်သည် 4.300 mAh ဘက်ထရီ.
နေဆဲ yeah Lenovo က ဆွဲဆောင်မှုရှိသည့်စျေးနှုန်းဖြင့်ရွေးချယ်ထားခြင်းမှာအမှန်တရားမှာ Lenovo Tab3 8 Plus ဖြစ်သည် အထူ 8mm ကျော်လွန်လိမ့်မည်မဟုတ်ပေ။ကြည့်ရတာတော်တော်ကြည့်ကောင်းပါတယ်
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Androidsis ပါ » NOTICIAS » ဒါကနောက်လာမယ့် Lenovo Tab3 8 Plus တက်ဘလက်ဖြစ်လိမ့်မယ်
Looty Dungeon သည်သင့်အားကြီးမားသောထိတွေ့မှုမပြုမီ pixel နှင့်အဆုံးမဲ့ထောင်ထဲတွင်ရှိနေသည်